Babehlala endaweni eyingozi. Lapho zonke izinyathelo uzibophezele izenzo ezingekho emthethweni. Lapho kukhona ndawo usizo, ngoba nezigilamkhuba ngempela kukhona amaphoyisa e-Los Angeles. Lapho kungekho ukuceba ngaphandle ukudayisa izidakamizwa. Kodwa, naphezu kwalokhu, bakwazi ukuthola udumo ngamazwe, izokhipha DEBUT albhamu yayo, "Straight aphume Compton."
Yiqiniso, omunye izinzuzo main of ifilimu "Straight aphume Compton" - abadlali kanye izindima ukuthi ukudlalwa. Phela, ukuze afeze ukufana esiphezulu nalezi rappers, omningi osekwenziwe. Umphumela waba sobala.
NWA iqembu yasungulwa ngasekupheleni '80s, futhi kwaba nomthelela kule nkinga rapper American aka Eazy-E. Ukuhlala edolobheni laseLos Angeles - Compton - futhi ukuqongelela imali enkulu ngokwanele imali, wanquma wathola sihlangene rap, simema guys ezine ngaphezulu kusuka esifundeni sami (Ice Cube, uDkt Dre, Dj Yella futhi MC Ren). Umqondo yaphumelela, futhi ngokushesha waqala ukuba avele NWA amarekhodi iqembu (Niggas Nge Sengqondo), manje ubhekwa abasunguli gangsta rap.
Nokho, ekuqaleni imizamo guys abaphumelelanga. Iqembu indiva zonke iziteshi zomsakazo namaqembu ngokuba imibhalo ziyingozi kakhulu kunothile inhlamba. Futhi hit yakhe Fuck amaphoyisa, bakwazi ukuheha amehlo Feds.
Hhayi ukuthi ngaphambi kokuba lokhu kwakungekho muntu owakhuluma kabi abamele umthetho, nje NWA enikelwe lonke le ngoma. Kungaba kuhle wazi ukuthi iqembu akudingi ubani ukuba ubudlova emsebenzini wakhe. Bamane ngicule ukuphila kwabo endaweni lapho hhayi usuku oludlulayo ngaphandle ukubulala, ukushushumbisa izidakamizwa, ubudlova kanye nesihluku samaphoyisa. Futhi ngo-1989 band safinyelela ithandwa enkulu.
Iqiniso ukuthi NWA liyabulala, yabe seyaziwa ngokuthi iqembu ngo-1990 washiya Ice Cube. Isizathu salokhu kwaba ingxabano umkhiqizi futhi ilungu project - Eazy-E. Wacabanga wayethola esingaphansi okubafanele.
Ngemva kwesikhashana, kwase kulandelwa nguDkt Dre ngenhlanhla kwenziwa nawukuthi zengxabano kanye umsunguli futhi umphathi we- abanonya Records ilebula. Ngaphandle-ke, iqembu Sekunzima nakakhulu. Ngemva kwalokho, iqembu uzama futhi zibenza babe munye, kodwa lokhu akwenzekanga.
Isithombe sichaza izenzakalo ezenzeka ngesikhathi sokuzalwa ukuchuma ukubola ethandwa hip-hop ithimba NWA Lisitshela indlela ezinhlanu guys engaziwa - Eazy-E, Ice Cube, Dr. Dre, MC Ren futhi Dj Yella - yashintsha rap. Izingane wahlala elinye lamadolobha ayingozi kakhulu e-United States - Compton, lapho Izinga lobugebengu liphezulu ukuze waphinda besaba ukuphumela phandle emgwaqweni.
Kodwa abe iphupho - emhlabeni udumo nokuduma, futhi lihamba, naphezu kwezithiyo. Eshukunyiswe umsebenzi eziningi-hip-hop amaphrojekthi kwaleso sikhathi, guys ukubhala isosha esihlatshelelwayo futhi ngokushesha wakhululwa ingoma yokuqala. Yabo ezingalindelekile impumelelo izaziso "ezinodaka" umkhiqizi Dzherri uHeller. NWA ithimba ezikhishwe albhamu yabo yokuqala, okuyinto kuba isinyathelo esikhulu maqondana iphupho babo ababathandayo. Ukuthandwa bagcina ukufinyelela, kodwa esasazi ukuthi izilingo kwadingeka aphume ngoba!
Ekuqaleni, ukudubula ifilimu "Straight aphume Compton '(abadlali wayengakezi abaqashwe) wayeya studio Umugqa Omusha Cinema, kodwa kamuva kwathi isivele ephethwe enye inkampani - Warner Bros, okungase zisuswe, kodwa yabe izimali esingaphansi kwakulindeleke ukuba uchithe imali abadali isithombe. Ngenxa yalokho, amasevisi walo kwakunamafasitela ukuba uyekwe.
Kodwa Universal Studios isabelomali bathandile, futhi yena akazange anqikaze, "iphuma out" $ 29 million. Ukuqopha okwaqala ngaphambi okuthayiphwe ngaso yokusakaza. Phela, uthembele izinzuzo intela, kwakudingekile okungenani kanye ngosuku ukuze ususe "Straight aphume Compton." Abadlali wabuye wabonakala kamuva. Futhi by the way, ukuwathola Kwakungelula, kusukela rappers yangempela bengakwamukeli ngeminyaka.
ukudubula Main waqala ehlobo lika-2014 Compton. Into enzima kunazo zonke kwaba ingacamelisa khona iqembu umlando NWA emahoreni angu ezinye 2.5. Futhi kusukela ngaleso sikhathi, sasingenayo kuphela ekuqaleni ifilimu, eziningi isibhamu kwadingeka ukuba usike. Kodwa isithombe namanje zaphumela okukhulu. Futhi into ezithakazelisayo kakhulu ukuthi lesi sigameko movie kungenzeka ixhunyaniswe iqembu NWA okokuqala kusukela nciphisa yayo. Ngokwengxenye enkulu, ecace umdlalo movie "Straight aphume Compton," nabalingisi lowomuntu kumuntu kumele kudingeke ukwethula kubahlanganyeli collective-hip-hop.
Le filimu wayalwa Buyela Umva Gray, abase ngokuvamile wathwebula isiqophi ngoba edumile-hip-hop abaculi. Ngenxa yalesi, wathola imiklomelo izikhathi eziningana. Ngokuyisisekelo nguye onquma lokho e ukuthwetshulwa isithombe "Straight aphume abadlali Compton 'abazohlanganyela. amafilimu Its futhi zihlanganisa "uJobe isiNtaliyane," "Loner," "I Negotiator," "I-Nutty Professor 'nabanye.
izindaba Operator asebenzelana Mettyu Libatik, owayehola ukuqopha "Idada Elimnyama" movie futhi "Iron Man 1 & 2".
Umqambi Dzhozef Trapaneze wabhala umculo befilimu "Ekuqothulweni", "Raid" futhi "Tron." Umsebenzi wakhe ungezwakala e ogawuthola eziningana. Futhi wayenza Ukudutshulwa dubbing ochungechungeni "Dexter."
"Out Straight ka Compton": abalingisi, izithombe
Ngokukhetha abadlali ngoba izindima ifilimu, Buyela Umva Gray ihlelwe eliphonswayo lonke, wakhe ubuhanjelwe abadlali ikakhulukazi engaziwa noma kancane-eyaziwa. Ngakho owangena indima esemqoka.
Iqembu Umsunguli umdali abanonya Records ilebula kudlalwa Dzheyson Mitchell.
Nokho, okokuqala, sikhetha ukwabelana indima nendodana Eazy-E, kodwa wathi lokho akwenzekanga. The guy akajabulanga ekuqaleni, kodwa ke waqala ngisho ukusiza Mitchell ukujwayela isithombe sikayise. Ngaphezu kwalokhu ifilimu umlingisi iqhaza ekudaleni amafilimu ezifana "UPawulu", "Idolobha okuphambene" futhi "Kushaqwe".
Google Dr. Dre waba nenhlanhla ukuba Corey Hawkins, ngalesi sikhathi kwadingeka ukuba iqhaza ukuthwetshulwa movie "Iron Man 3", ifilimu emfushane Empire Corner futhi uchungechunge TV "Doctor othandekayo".
Ngaphezu kwalokho Hawkins sivunyiwe ngoba indima ukuhola ku ukuqalisa phansi "amahora 24" we-franchise, kanye indima isizini wesithupha "The Walking Dead."
Cishe bonke abadlali ( "Straight aphume Compton") abangu ukubuthwa ngaphandle, kodwa indima yalesi rapper ke wakhethwa Indodana yabo eneminyaka engu-24 ubudala, O'Shea Jackson Jr. Lokhu akusona isimanga, ngoba ufana nobaba emhlabeni.
Kwaba indima yakhe yokuqala ifilimu, futhi zabhekana kangcono nalezi ke. Ice Cube ngokwakhe wathi guy ngokuvamile ephakama ingqondo umbono ukulahla lesi sigameko, kodwa rapper owaziwa wakwazi ukukholisa indodana yakhe ukuthi ungcono kuye kungabikho muntu.
A rapper, okwakuthi ngemva esikoleni wayehamba ukuba azihlanganise nebutho lezempi, kodwa ngenxa yalokho waba nesithakazelo-hip-hop isiko, ezimiselwe ukudlala Aldis Hodge.
Bangaki got indima movie "Straight aphume abadlali Compton ', yena nalo ovuthayo kumafilimu ambalwa:" Die Hard 5 "futhi" Bed of Roses ". Kwakukhona uchungechunge "NYPD Blue" nangokuthi "CSI:. Crime Scene Investigation" Futhi umdlalo GTA 5, lizwakalise yomunye wabalingiswa.
Umsebenzi wakhe zomculo waqala kude kwasungulwa NWA Ngisho nangaphambi kokuba enze lokho, kwakuhileleke yena kuphrojekthi okufanayo Dr. Dre. Kwakuthinta kuphela kamuva yaba ilungu owasungula iqembu esesikhulume ngazo.
Ngehlangothini yakhe umlingisi Nil Braun Jr. likhethiwe., Ubani ngalesi sikhathi kakade iqhaza kulesi sigameko films efana "ayehlasela alien", "ungayeki" futhi "Out of Time".
Yize ifilimu, singasho ngokuqiniseka ukuthi ukuphathwa kanye nabalingisi ka "Straight aphume Compton 'wasebenza futhi idlalwe ezingeni eliphezulu. Ngaleso kubonisa amaqiniso okungenani ezimbili. Okokuqala - labelwe $ 29 million umbukiso kwabasiza cishe 10 izikhathi. Owesibili - kakade Izibuyekezo eminingi emihle nempendulo kusukela kubantu eziye zabona ifilimu basutha nabo ebhaliwe.
Ngokuzalanisa nutria ekhaya. Uhlelo lwebhizinisi ezifanelekayo ukufuya nutria
Indlela esiphatha ngayo ukucinana kwemigudu yokuphefumula kwabadala. Ikakhulukazi ekwelapheni ukucinana kwemigudu yokuphefumula oyingozi futhi ezingalapheki
Ngo-umthetho - umama wesibili? Umama emthethweni futhi umakoti: ubuqili ubudlelwano